အချစ်ဖွဲ့လေညင်းဇာတ်ကားထဲက ရှေးနဲ့ မိုးသောက်ကို သဘောတူနေပါပြီဆိုတဲ့ ခင်သဇင် – Suehninsi
ပရဟိတ မင်းသမီးချောလေး လို့ ချီးကျူးပြောဆိုနေကြတဲ့ ခင်သဇင်ကတော့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေတဲ့ သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်သဇင်က ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေတဲ့အပြင် MRTV -4မှာ ထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာလည်း
ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေသူလေးပါနော်..။ ဒါ့အပြင် ခင်သဇင်က ကြော်ငြာတွေနဲ့ photo shooting တွေကိုလည်း လက်ခံရိုက်ကူးနေရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်……။ ခင်သဇင်ရဲ့ လတ်တလောအနုပညာလှုပ်ရှားမှုကတော့ ” အချစ်ဖွဲလေညင်း ” ဇာတ်လမ်းတွဲလေးထဲမှာ
မိုးကလျာ ဆိုတဲ့ ကာရိုက်တာလေးနဲ့ ကြိုးစားသရုပ်ဆောင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးထဲက အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေ သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာထက်မှာ မကြာခဏဆိုသလို တင်ပေးလေ့ရှိနေတာကြောင့် ပရိသတ်တွေကလည်း
စောင့်မျှော်အားပေးနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်….. ။ ခင်သဇင်က မကြာသေးမီအချိန်က သူမရဲ့ ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ်ကနေ ” အချစ်ဆိုတာ ချစ်ခိုင်းတိုင်း ချစ်လို့ရတာမှ မဟုတ်တာပဲလေ မိုးသောက်ဦး ရှေးရေစက် တို့ကတော့ သဘောတူနေပါပြီနော် …
ဘယ်နေရာမတူလို့ ရှေးက အဲလောက်စဉ်းစားနေတာလဲ မသိဝူး” ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးထဲက မမမိုးရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို တင်ပေးလါတာကြောင့် ချစ်ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရှုစေနိုင်ရန်အတွက် ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်……. ။
ပရဟိတ မငျးသမီးခြောလေး လို့ ခြီးကြူးပွောဆိုနကွေတဲ့ ခငျသဇငျကတော့ အနုပညာလှုပျရှားမှုတှကေို ကွိုးစားလုပျကိုငျနတေဲ့ သူလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခငျသဇငျက ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှမှော ပါဝငျသရုပျဆောငျနတေဲ့အပွငျ MRTV -4မှာ ထုတျလှငျ့ပွသနတေဲ့ ဇာတျလမျးတှဲတှမှောလညျး
ပါဝငျသရုပျဆောငျနသေူလေးပါနျော..။ ဒါ့အပွငျ ခငျသဇငျက ကွျောငွာတှနေဲ့ photo shooting တှကေိုလညျး လကျခံရိုကျကူးနရေတာလညျး ဖွဈပါတယျ……။ ခငျသဇငျရဲ့ လတျတလောအနုပညာလှုပျရှားမှုကတော့ ” အခဈြဖှဲလညေငျး ” ဇာတျလမျးတှဲလေးထဲမှာ
မိုးကလြာ ဆိုတဲ့ ကာရိုကျတာလေးနဲ့ ကွိုးစားသရုပျဆောငျထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဇာတျလမျးတှဲလေးထဲက အမှတျတရပုံရိပျလေးတှေ သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျ စာမကျြနှာထကျမှာ မကွာခဏဆိုသလို တငျပေးလရှေိ့နတောကွောငျ့ ပရိသတျတှကေလညျး
စောငျ့မြှျောအားပေးနကွေတာပဲ ဖွဈပါတယျ….. ။ ခငျသဇငျက မကွာသေးမီအခြိနျက သူမရဲ့ ဖဘှေ့တျစာမကျြနှာပျေါကနေ ” အခဈြဆိုတာ ခဈြခိုငျးတိုငျး ခဈြလို့ရတာမှ မဟုတျတာပဲလေ မိုးသောကျဦး ရှေးရစေကျ တို့ကတော့ သဘောတူနပေါပွီနျော …
ဘယျနရောမတူလို့ ရှေးက အဲလောကျစဉျးစားနတောလဲ မသိဝူး” ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ ဇာတျလမျးတှဲလေးထဲက မမမိုးရဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို တငျပေးလါတာကွောငျ့ ခဈြပရိသတျတှေ ကွညျ့ရှုစနေိုငျရနျအတှကျ ပွနျလညျတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျနျော……. ။